Beren Saat - Wikipedia
Saat ee 2015
(1984-02-26) 26 Febraayo 1984 ( 38jir)
Kenan Doğulu (g. 2014)
Beren Saat (Ku dhawaaqa Af-Turki: [beˈɾen saˈat]; dhashay 26 Febraayo 1984) waa atariisho Turki ah oo ku dhashay kuna soo barbaaray Ankara. Tan iyo bilawgii xirfadeeda, waxay heshay abaalmarin muhiim ah iyo abaalmarino badan oo ku aaddan jilitaankeeda. Intii ay wax ku baraneysay Jaamacadda Başkent, waxay ka qeybgashay tartanka jilitaanka ee Türkiye'nin Yıldızları waxaana ogaadey agaasimaha Turkiga Tomris Giritlioğlu, iyadoo bilawday xirfadeeda jilitaanka xirfadeed.
Saat waxay sameysay jilitaankeedii ugu horreeyay iyada oo qayb yar ka leh taxanaha telefishanka Aşkımızda Ölüm Var (2004). Waxay markaa u diyaarisay Tomris Giritlioğlu doorkeedii ugu horreeyay ee ugu weynaa Aşka Sürgün (2005–2006). Waxay xiddig u ahayd Yasemin Ünsal ee taxanaha siyaasadeed ee ATV Hatırla Sevgili (2006–2008) waxayna u soo jiidatay indhaha caalamka doorkeeda Bihter Yöreoğlu Ziyagil, oo ah xaas aan aamin ahayn, ee taxanaha Kanal D'a Aşk-ı Memnu (2008–2010), taas oo ay ku heshay abaal marin muhiim ah kuna guulaysatay abaalmarino badan, oo ay ku jiraan laba Abaalmarin oo Balanbaalis ah. Kaalinteeda kale ee waaweyn ee telefishanka waxaa ka mid ah dhibane kufsi, Fatmagül Ketenci Ilgaz, oo ku jira riwaayadaha bulshada Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010–2012), iyo aargoosi lagu magacaabo Derin Çelik/Yağmur Özden İntikam (2013–2014). Laga soo bilaabo 2015 illaa 2016, waxay xiddig u ahayd jilaha cinwaanka taxanaha taariikhiga ah Muhteşem Yüzyıl: Kösem . Intii u dhaxeysay 2019 iyo 2021, Saat wuxuu lahaa doorka hoggaamineed ee taxanaha asalka ah ee Netflix The Gift.
Saat wuxuu ahaa aktarada ugu mushaarka badan Turkiga intii u dhexeysay 2008 ilaa 2014. Waxay ka qaybgashay dhowr filim sida jilaa cod. Waxaa loogu magac daray Aktarada Sanadka "2010 Damgasını Vuranlar" ee uu daabacay wargeyska Radikal. Ka sokow xirfadeeda jilitaanka, Saat waxaa lagu xusayaa dadaalkeeda samafalka. Waxay guursatay heesaaga Kenan Doğulu ilaa 2014. Saat waa taageere xuquuqda haweenka ee Turkiga, waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee ka falceliyay dilka Özgecan Aslan iyagoo farriimo ku daabacay akoonnada ay ku leedahay baraha bulshada. Farriimaha ayaa ka koobnaa macluumaad ku saabsan waaya-aragnimadeeda caqabadaha iyo dhibaatooyinka haweenka ee Turkiga.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Beren_Saat&oldid=228930"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Jannaayo 2022, marka ee eheed 05:26.